Virus သတ်ရာမှာ သေးသေးလေးနဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Smadav 2016 Rev 10.7 New Update - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Antivirus Computer software Virus သတ်ရာမှာ သေးသေးလေးနဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Smadav 2016 Rev 10.7 New Update
Virus သတ်ရာမှာ သေးသေးလေးနဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Smadav 2016 Rev 10.7 New Update
Maung Pauk at 10:08:00 PM Antivirus, Computer software,
Smadav 2016 Rev 10.7
သေးသေးလေးနဲ့ တော်တော် အစွမ်းထက်တဲ့ Smadav ကတော့ ဇွန်လ ၂ ရက်စွဲနဲ့ Update Version ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. virus database ပေါင်း 500 မျိုးထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားပြီး Singature စုစုပေါင်း 17150 မျိုးကို ရှာဖွေရှင်းလင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်က သေးသေးဖြစ်ပေမယ့် သိပ်ကို အစွမ်းထက်ပါတယ်.. Scan လုပ်တာလည်း မြန်ပြီး ကွန်ပျူတာရဲ့ သွက်လက်မှုကို အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေပါဘူး...
[ သေးသေးလေးနဲ့ တျောတျော အစှမျးထကျတဲ့ Smadav ကတော့ ဇှနျလ ၂ ရကျစှဲနဲ့ Update Version ကိုထုတျပေးလိုကျပါတယျ.. virus database ပေါငျး 500 မြိုးထပျမံထညျ့သှငျးပေးထားပွီး Singature စုစုပေါငျး 17150 မြိုးကို ရှာဖှရှေငျးလငျးပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.. ဖိုငျဆိုဒျက သေးသေးဖွဈပမေယျ့ သိပျကို အစှမျးထကျပါတယျ.. Scan လုပျတာလညျး မွနျပွီး ကှနျပြူတာရဲ့ သှကျလကျမှုကို အနှောငျ့အယှကျ မဖွဈစပေါဘူး... ]
4) Cleaner and tools to clean virusSmadav can clean some virus that already infected your PC and also fix the registry change made by the virus. Many tools included in Smadav to fight for virus cleaning. The tools are :
Smadav 2016 Rev 10.7 : 1.37 Mb
Original Download Links